भारतीय ड्राइभरहरुबाट काठमाडौँमा को*रोना संक्रमणको उच्च जोखिम, के अब नेपाललाई घेरिसकेको हो को*रोनाले ? – Online Nepal
भारतीय ड्राइभरहरुबाट काठमाडौँमा को*रोना संक्रमणको उच्च जोखिम, के अब नेपाललाई घेरिसकेको हो को*रोनाले ?
काठमाडौं, बैशाख ३० – सरकारले उपत्यका प्रवेश गर्ने नाकाहरूमा सवारीसाधन कडाइ गरेर उपत्यकालाई केही खुकुलो पारे पनि यहाँ कोरोना संक्रमणको जोखिम उच्च देखिएको छ। भारतीय नाका हुँदै फलफूल, खाद्यान्न, औषधि, ग्याँस, पेट्रोलियम पदार्थलगायत सामग्री बोक्ने सवारीसाधनबाटै उपत्यकामा संक्रमण फैलन सक्ने त्रास बढेको हो। यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा छ ।
Prevकालापानी क्षेत्रमा नेपाली सेनाको हेलिकप्टर
Nextभारतको दादागिरीको यसरी अन्त्य गर्न चाहान्छ नेपाल, सीमानामा नै अब २४ सै घण्टा सुरक्षाकर्मी राख्ने तयारी